Samachar Batika || News from Nepal » थाहा छ तपाईलाई ‘ओम’ जप गर्दामात्र ठिक हुन्छन् यी छ राेगहरु
थाहा छ तपाईलाई ‘ओम’ जप गर्दामात्र ठिक हुन्छन् यी छ राेगहरु
पोखरा । ‘ओम’ यो शब्द हामी बेलाबखत जप गर्छौ। ओम जप गर्दा के हुन्छ ? मुखबाट ओम आवाज निकाल्दा त्यसले स्थुल शरीर र मनमा कस्तो प्रभाव पार्छ होला ? पक्कैपनि यो शब्द जप गर्नु कुनै ढोंग मात्र होइन। आडम्बर होइन। यसमा वैज्ञानिक तथ्य पनि छ। धेरैजसो मन्त्रमा यो शब्द समावेश छ। हिन्दु मात्र होइन, वौद्ध, जैन, सिख सबै धर्मसँग यो शब्दको साइनो छ।
ॐ अर्थात ओम। यसलाई ओमकार वा प्रणव पनि भनिन्छ। यति एउटै शब्द, जले सम्पूर्ण ब्रम्हाड समेटेको छ। ओम धार्मिक होइन, यो हिन्दु धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म जस्ता केही धर्ममा एक पारम्पारिक प्रतिक र पवित्र ध्वनीको रुपमा प्रकट हुन्छ। ओम कसैको आफ्नो निजी सम्पति होइन। यो सार्वभौमिक हो। यसमा नै पुरा ब्रम्हाण्ड छ।
ओमलाई प्रथम ध्वनी मानिन्छ। के भनिन्छ भने ब्रम्हाण्डमा भौतिक निर्माण अस्तित्वमा आउनुअघि जुन प्राकृतिक ध्वनि थियो, त्यो ओमको गुञ्जन थियो। यसैले ओमलाई ब्रम्हाण्डको आवाज पनि भनिन्छ। सबैकुरा जहाँ स्पन्दित हुन्छ, त्यसबाट एक लयबद्ध कम्पनको निर्माण हुन्छ। यसलाई प्राचिन योगीले ओम ध्वनिमा कैद गरेका थिए।
हामी अहिले दैनिक जीवनमा यस ध्वनिप्रति सचेत छैनौ। तर, ध्यान दिएर सुन्ने हो भने यसलाई शरद ऋतुको पातमा, सागरको छालमा, शंखको भित्र सुन्न सकिन्छ। ओमको जपले हामीलाई पुरा ब्रम्हाण्डको यही चालसँग जोड्छ र त्यसको हिस्सा बनाइदिन्छ, चाहे त्यो अस्ताइरहेको सूर्य होस्, उदाउँदै गरेको चन्द्रमा होस्, ज्वारको प्रवाह हो, हाम्रो मुटुको धड्कन हो, या त हाम्रो शरीरको भित्र हर परमाणुको आवाज।
जब हामी ओम जप गर्छौ, यो हाम्रो सास, हाम्रो जागरुकता र हाम्रो शारीरिक उर्जाको माध्यमबाट यस सार्वभौमिक चालको सवारीमा लिएर जान्छ। हामीलाई त्यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउँछ, जहाँ मन र आत्मालाई शान्ति प्राप्त हुन्छ।
ओम शब्दको गठन वास्तविकता मनुष्य जातिाको सबैभन्दा महान आविष्कारमा एक हो। ओमलाई सबैभन्दा पहिले उपनिषद -जो वेदान्तसँग जोडिएको लेख हो)मा वणिर्त गरिएको छ। उपनिषदमा ओमको अलग-अलग किसिमले वर्णन गरिउको छ, जस्तो कि, ब्रम्हान्डीय ध्वनि, रहस्यमय शब्द वा दैवीय प्रतिज्ञान।
संस्कृतमा ओम शब्द तीन अक्षरले बनेको हुन्छ, अ, उ र म। ओमको अर्थ हो सुरुवात, मध्य र अन्त्य। रोचक त के भने, ति सबै ध्वनि चाहे त्यो जतिसुकै अलग होस् वा कुनैपनि भाषामा बोलियोस्, ति सबै यी तीनको सीमाभित्र आउँछ। यति मात्र होइन, सुरुवात, मध्य र अन्त्यको प्तिक यो तनि अक्षर स्वयम् सृष्टिको प्रतिक हो।
यसैले सबै भाषामा सबै प्रकारको ध्वनि यस एकल शब्द ओमको उच्चारणमा समाहित हुन्छ। ओम जप गर्दा एक कम्पन उत्पन्न हुन्छ, जसले पुरा शरीरमा एक सौम्य अनुभव प्राप्त हुन्छ। ओमको जपले मनलाई स्थिर र शान्त बनाउँछ। यद्यपी ओमको महत्व र विधी जानेर नै जप गर्नुपर्छ। हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ कि ओम ईश्वरको प्रतिक हो, जसले हाीलाई वास्तविक प्रकृतिको नजिक पुर्‍याउँछ। र, आपसी दुरी घटाउँछ।
पतञ्जली योग सूत्रका अनुसार ओम जप गरिरहँदा मन र मस्तिष्कलाई एकत्रित गर्नुपर्छ। कुनैपनि आरमदायक स्थानमा बसेर जप गर्नुपर्छ। जस्तो पद्यासन, सुखासन, सिद्धासनमा बस्न सकिन्छ। मेरुदण्ड र टाउकोलाई सिधा राख्नुपर्छ। आँखा बन्द गर्नुपर्छ र गहिरो सास लिनुपर्छ। अब सास छाड्दै ओम बोल्नुपर्छ। नाभी क्षेत्रमा ओ आवाजबाट हुने कम्पन महसुष गरौ र त्यसलाई क्रमस माथितर्फ बढेको महसुष गरौ।
मन्त्र जारी राखिरहँदा त्यसको कम्पन गलाबाट माथि बढेको महसुष गरौ। जब कम्पन गलाको क्षेत्रमा पुग्छ, तब ‘म’लाई एक गहिरो ध्वनीमा परिवर्तन गरौ। कम्पन तबसम्म महसुष गरौ, जबसम्म त्यो शिरसम्म पुग्दैन। यो प्रक्रियालाई तपाईंले दुईपटक भन्दा बढी दोहोर्‍याउन सक्नुहुनेछ। अन्तिम मन्त्र जपपछि पनि बसिरहनुहोस् र पुरा शरीरमा ओम ध्वनिको कम्पन महसुष गर्नुहोस्।
ओमको उच्चारणले भगवान मात्र खुशी हुने होइन्, यो मन्त्रको जपबाट मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा पुग्छ। ओम उच्चारणबाट उत्पन्न हुने तरंगले दिमागलाई शान्त राख्न सहयोग पुर्याउँछ। यसले धेरै विरामीहरु ठिक हुने कुरा वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित भइसकेको छ।
१. थाइराइडः हरेक दिन ओम्को उच्चारण गर्दा थाइराइडको समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ।
२. एन्जाइटीः ओमको उच्चारणले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा पुग्छ। यसको उच्चारणले त’नाव, ड’रजस्ता समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ।
३. स्ट्रेस वा टे’न्सनः ओमको मन्त्रको जप गर्दा मानसिक शान्ति मिल्छ। यसले चि’न्ता, त’नाव, मानसिक थकानलाई टाढै राख्छ।
४. ब्लड सर्कुलेसनः ओमको उच्चारणले शरीरमा ब्लड सर्कुलेसनलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ। यसको दिनहुँ उच्चारण गर्दा रगतमा अक्सिजनको मात्रा वृद्धि हुन्छ।
५. स्वस्थ मुटुः दैनिक यसको जप गर्दा ल‌ंग्स, बिपी र ब्लड सर्कुलेसनमा सन्तुलित हुन्छ। यसले मुटुपनि स्वस्थ रहन सहयोग गर्छ।
६. डाइजेशनः ओमको उच्चारणले पेटमा भाइब्रेसन उत्पन्न हुन्छ, जसले पाचन प्रक्रिया सन्तुलित रहन्छ।
प्रकाशित मिति २० माघ २०७६, सोमबार १०:२१